UJAMES CAMERON UTHATHELA INGQALELO I-AVATAR 2 UKUBA IBE YEYONA BHANYA-EPHAKAMILEYO- [GROSSING] KWAKHONA EMVA KOKUBA YATHATHWA YIAVENGERS ENDGAME - IIMUVI
Uninzi lweemovie ezinkulu ziza kwaye zihambe, kwaye i-Avatar iseyifilimu ephezulu kakhulu enomtsalane kwihlabathi. Ividiyo, ikhutshiwe
Uninzi lweemovie ezinkulu ziza kwaye zihambe, kwaye I-Avatar isengowona mboniso bhanya-bhanya ubalaseleyo unezibheno kwihlabathi liphela. Ividiyo, ekhutshwe ngo-2009, inezicwangciso ezinkulu zokulandelelana kwayo. Emva kokuthatha ixesha elininzi, abenzi beefilimu ngoku baqalile ukusebenza kwisahlulo sesibini nesesithathu. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi I-Avatar 2 .
Abenzi ndagqiba kwelokuba ndikhulule I-Avatar ngaphambi kukaDisemba 2015. Kodwa ilibazisekile kwakhona Kwaye kwakhona. Ngoku ekugqibeleni, umhla wokukhutshwa ubhengeziwe. I-Avatar 2 izakuza ngoDisemba 17, 2021. I-Avatar yoqobo yayifumene umlinganiso we-PG-13. I-Avatar 2 kunye nezinye izinto ezilindelweyo ngokuqinisekileyo zilindele inqanaba elifanayo kunye nempendulo efanayo.
Umsebenzi owenziwe nguJames Cameron e-Avatar wawunomdla. Ukuphuhliswa kweempendulo, iteknoloji yayingumsebenzi weminyaka. Ngokuqinisekileyo, akasayi kunika omnye umntu sequels. UJames Cameron akazukuqhubeka kwi-Avatar 2 kuphela kodwa nakwi-3,4 kunye ne-5. Ngeli xesha unezicwangciso ezinkulu zetekhnoloji ye-movie kwaye ucwangcise ukudubula phantsi kwamanzi ngeli xesha.
I-Avatar 2 ayinayo nayiphi na imibhalo engezantsi egqityiweyo okwangoku. Isicatshulwa seendlela ezizayo, uJames Cameron uzise iqela labadibaniselwano, kubandakanya uJosh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, kunye noShane Salerno. Isalathiso asikabikho, kodwa abalawuli bathi ezi sequels ziya kwazisa umhlaba omtsha, indawo yokuhlala kunye neenkcubeko. Kuthetha ukuba iintlobo ezintsha zasemzini ziya kubonakala. Ngokwimithombo, ibali le-Avatar 2 liza kugxila kulwandle lweplanethi iPandora.
Ngoobani abalinganiswa abatsha?
Umlinganiswa ophambili we-Avatar Jake Sully uya kubuya emva kokulandelayo. USam Worthington sele etyikitye isivumelwano sokuqhubeka kwaye uzakudlala u-Na-vi Jake Sully ojikwe ngumntu ngekamva elibonakalayo. Ndikunye noJake Sully, uthando lwakhe lwasemzini uZoe Saldana njengoNeytiri naye uya kuvela kwi I-Avatar 2,3,4 kunye ne-5 . UGqr Augustine, osweleke e-Avatar, uza kubuya ngokulandelelana okuzayo.
Abaphulaphuli banokucinga ukuba umfi uswelekile. Kodwa ayiyonyani leyo. Uya kuqhubeka nokuza nomkhosi wakhe kwii-sequels ezizayo. Abanye abalinganiswa ababuyayo baquka uDileep Rao wadlala uGqr Max Patel, uJoel David Moore njengoNorm Spellman, uCCH Pounder uzobuya njengoMo 'e.I-Avatar 2 iya kutyhila impucuko yanamhlanje yepandora.Ibali liya kuxhomekeka ikakhulu kubantwana bakaJack noNeytiri, kodwaUninzi lwabalinganiswa abatsha abaza kujoyina i-movie.
Kwakhona, kuya kubakho into eyahlukileyo kunye entsha kwitekhnoloji kwezi ndlela zilandelayo. Inokudibanisa isisombululo se-4k, i-3D, kunye namaxabiso aphezulu esakhelo. UJames ukulungele ukusebenzisa itekhnoloji ye-3D apho abaphulaphuli kunganyanzelekanga ukuba banxibe iiglasi. Nangona kunjalo, itekhnoloji ayifumaneki okwangoku. Ke okunene kuninzi okuzayo kulandelelwano oluzayo lweAvatar.
Umkhenkce 3 umhla wokukhutshwa 2023
Igumbi lokufundela le-elite
Isiqendu somntu wasekhaya
Iintsuku ezingama-365 zenxalenye 2 yomhla wokukhutshwa kwi-netflix
Bungou ukulahleka kwezinja isiqendu 11